အခုအချိန်တွေသူနဲ့ အခုလိုပဲတွေ့ ရပါတယ်...
မင်္ဂလာပါရှင်.... ဒီတစ်ခါတော့ လမင်းတို့ ချစ်သူနှစ်ယောက်အကြောင်းလေးရေးချင်ပါတယ်.. . ဒီနေ့ လေးက လမင်းတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ အမှတ်တရနေ့ လေးပါ။။ သတိထားမိလားတော့မသိဘူး။။ (၂၅)ရက် ရောက်ရင် လမင်းကဗျာရေးတင်တတ်တယ်။။ သူနဲ့ ပတ်သက်တာလေးပေါ့။။ မတင်ဖြစ်တဲ့ရက်ဆို စိတ်ကောက်ထားလို့ ပါ..:D လမင်းရေးချင်တာက ဘယ်လောက်ချစ်ကြလည်း ဘယ်လို ဂရုစိုက်ကြလည်းဆိုတာထက်.. ချစ်သူတွေကြား ဖြစ်တတ်တာလေး နဲ့ 
ဖြစ်နေတာလေးတွေပဲရေးတော့မယ်။။ သူကို ဘယ်လောက်ချစ်တယ် အသက်လောက်ချစ်တယ်..
ပြောရမဲ့ရူးမိုက်မိုက်အရွယ်တွေလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေ... ပထမပြောချင်တာက.. လမင်းတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့့အကျင့်စရိုက်လေးတွေကိုပြောချင်ပါတယ်။။
အသွင်တူလားတော့မသိဘူး။။:P လမင်းကစိတ်ခဏခဏကောက်တတ်တယ်. သူလည်းမချော့တတ်ဘူး..အေးရော ..:) သူငယ်ချင်းတွေကပြောကြတယ်.. နင်တို့ အတွဲက သူစိမ်းဆန်တယ်..နွေးထွေးမှုမရှိဘူး။။ ယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးလို့ ပြောကြတယ်။။ တကယ်ချစ်ကြတာရောဟုတ်ရဲ့ လားလို့ လည်းမေးတတ်ကြတယ်။။ တကယ်တော့လမင်းတို့ နှစ်ယောက်က ပွင့်လင်းကြပါတယ်.. သူဘယ်လောက်ချစ်လည်းလမင်းမသိချင်ဘူး..။ ငါသူကိုဘယ်လောက်ချစ်နိုင်လည်းပဲတွေးတယ်။.. လမင်းကပြောထားပြီးသား လုပ်ချင်တာလုပ်နိုင်တယ်.. လုပ်တော့မယ်ဆို သေချာစဉ်းစား ကိုယ့်အတွက် ကိုယ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့သူအတွက် အကျိုးရှိမရှိအရင်စဉ်းစား ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူနိုင်ရမယ်။။ လမင်းသူကိုသ၀န်တိုတာတွေလည်းသိပ်မရှိဘူး.. မချစ်လို့မဟုတ်ဘူး .. လူဆိုတာက ချုပ်ချယ်လေ လွတ်လပ်ချင်တဲ့သဘောရှိတတ်ကြတော့.. လမင်းက အရမ်းသ၀န်တိုနေမယ်. . ဟိုလူနဲ့ မပြောရဘူး ဟိုဟာမလုပ်ရဘူး.. ဆိုသူ စိတ်ကျဉ်းကျပ်မယ်။။ အဲတော့ ခိုးလုပ်လာမယ်.. လမင်းအကြောက်ဆုံးက အလိမ်ခံရမှာကိုပဲ..တစ်ခါတလေ မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို အထင်ကြီးတတ်ကြတယ်.. ငါချစ်သူက ဘယ်လို ငါပြောတာဆို အကုန်လုပ်တယ်။။ငါစကားနားထောင်တယ်..ဆိုတာမျိုးတွေပဲ... လမင်းအဲလိုအကြောက်ဆုံးပဲ.. မကြိုက်တာတွေကိုပြောထားတယ်။။ လုပ်သင့်မလုပ်သင့် ကိုယ်တိုင်းစဉ်းစား သူလမင်းကို ချစ်ရင် ဘာမှမပြောလည်း သူလုပ်မှာပဲလေ.. ဥပမာ မိန်းကလေးတွေက ကိုယ့် ချစ်သူကို အရက်သောက်တာ ဆေးလိပ်. တွေသောက်တာ မကြိုက်ကြဘူး။။ ယောင်္ကျားလေးတွေမလုပ်နိုင်တော့ စကားများ စိတ်ကောက်.. လမင်းလည်းအရင်ကတော့အဲလိုရှိတယ်။။ အခုတော့မပြောတော့ဘူး.. သူလုပ်လည်းလမင်းမသိဘူး။။ ဒါပေမဲ့ လမင်းမကြိုက်ဘူးပြောထားတယ်။။ လုပ်သင့်မသင့် သူပဲစဉ်းစားပါစေ.. အရက်သောက်တာမကောင်းဘူး ဆေးလိပ်သောက်တာ မကောင်းဘူး သူလည်းသိတယ်..အဲတော့လမင်းမပြောတော့ဘူး။။ သူလည်းကလေးမှ မဟုတ်တော့တာ ရည်းစားတောင်ထားတတ်နေပြီးပဲလေ:P နောက်တစ်ခုက နင်ကောင်လေး အကောင့် password သိလား .ယူထားပေါ့။။ လမင်းမယူထားပါဘူး.. လမင်းလည်းမပေးထားဘူး။။ ဒါဟာ သူစိမ်းဆန်တယ်လို့ ပြောကြတယ်.. တစ်ချို့ ကတော့နှစ်ယောက်အတူတူ သုံးကြတယ်..လမင်းကအဲလိုမကြိုက်ဘူး.. ချစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဇနီးမောင်နှံတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့ စည်းကမ်း ကိုယ့်စည်းကမ်း ဆိုတာတော့ရှိသင့်တယ်ထင်တာပဲ.. ပြီးတော့လမင်းတို့ ကချစ်သူတွေ ဘ၀တစ်ခုကို နှစ်ယောက်အတူဖြတ်သန်းကြသေးတာမဟုတ်တော့ အကုန်မပါချင်ဘူးလေ သူမှာလည်းသူအကြောင်းနဲ့ သူရှိမယ်.. အဓိက က သူလမင်းကို ချစ်နေမယ် သူကို လမင်းချစ်နေမယ်.. သစ္စာရှိကြမယ်ဆို ပြီးတာပဲလို့ ထင်တာပဲ။။ password ပေးထားပြီး ချက်( chat) ထားတာတွေဖျက်ထားလည်းလမင်းဘာမှမသိဘူး..အဲ့လောက်တော့ မအချင်ဘူးလေ.. ဥပမာ လမင်းဆို ချက်လင့်မယူထားတတ်ဘူး ဒါကလည်းလမင်းချက်မေးလ်တွေမရှင်းချင်တာနဲ့အရေးကြီးတာလည်းမရှိတော့ အမြဲအဲလိုပဲထားတယ်.. သူလည်းအဲလိုထားရင် လမင်းမသိဘူးလေ.. အခုတော့ ဘာစိတ်ကူးပေါက်လည်းမသိဘူး.. လမင်းအကောင့်password တောင်းနေပါတယ်.. လမင်းပေးလိုက်တယ်..သူလည်းပေးတယ်...လမင်းဘာလုပ်နေလည်းဘယ်သူတွေနဲ့ ချက်လည်းသိချင်မှာပဲလေ.
.လမင်းကတော့သူအကောင့်ထဲသိပ်တော့မ၀င်ဖြစ်ပါဘူး.. သူပြောထားတာတွေ တွေ့ လို့ မကြိုက် ရင်ကိုယ်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ်.. စိတ်ပင်ပန်းမခံချင်တော့ဘူးလေ...လမင်းက ဇီဇာကကြောင်တတ်တယ်.. ပြဿနာသေးသေးကိုလည်းကြီးအောင်လုပ်တတ်တော့.. သူကိုလည်း စိတ်ရှုပ်ခံစေချင်ပါဘူး။။အဲတော့လမင်းတို့ နှစ်ယောက်က အရမ်းရင်းနှီးကြသူနှစ်ယောက်က သူစိမ်းတွေလိုဖြစ်နေကြပြန်တယ်။။။ သူဘက်ကလည်းလမင်းကိုမကြိုက်တာလည်းရှိနိုင်သလို ကိုယ်လည်းရှိတာပဲ.. နားလည်မှု ထိုစကားကပြောလို့ သာလွယ်တာ. တကယ်လုပ်ဖို့ ကြတော့ အတော်လေးကို ခက်ပါတယ်။။။ နားလည်မှုကို လမင်းအဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ရရင်တော့.. ချစ်နေသ၍အချစ်တွေသူအပေါ်ရှိနေသမျှ နားလည်ပေးနေအုံးမှာပဲလေ.. အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပေါ့...သစ္စာဆိုတာလည်း မေတ္တာရှိနေသ၍ သစ္စာဆိုတာလည်းရှိနေအုံးမှာပါပဲ..လမင်းတို့ နှစ်ယောက်ကို စောင့်ကြည့်နေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိကြပါတယ်။။ ဘယ်လောက်အထိချစ်ကြမလည်း ဘယ် လ၊ နှစ် ခံမလည်းပေါ့.. တစ်ချို့ဆို လမင်းနင့်ကောင်လေးနဲ့ ပြတ်သွားပြီးလာလို့တောင်ပေါ်တင်မေးတတ်ကြတယ်။။ ဒါကလည်း မေးတဲ့သူတွေအပြစ်လို့တော့ပြောလို့ မရဘူး.. လမင်းတို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ မဖြစ်နိုင်တာတွေ အရမ်းကိုများနေတာ့ အမေးခံရတာလည်းမဆန်းပါဘူး။။။ ဒါပေမဲ့ အချစ်ဆိုတာကလည်း ခက်သားလား.. လမင်းခံယူထားတဲ့ အချစ်ကတော့..ချစ်နေဖို့ပဲလိုတာပါ။ တိုင်ပင်တာမျိုးတွေတော့ရှိပါတယ်..လမင်းဘာလုပ်လုပ်သူကိုပြောတယ် ..တိုင်ပင်တယ်.. ခွင့်ပြုရင်ပြုမပြုလည်းလုပ်တယ်။။ လမင်းစိတ်ကိုကလုပ်ချင်တာဆိုလုပ်လိုက်ရမှာဆိုတော့ အသိပေးတဲ့သဘောပေါ့..သူကသဘောကောင်းတော့လုပ်ပဲပြောပါတယ်။။:D တော်လောက်ပြီးထင်တယ်နော်..:D လမင်းရေးတာတွေကချစ်သူတွေကြားဖြစ်တတ်တာလေးအနည်းအငယ်ပေါ့.. ရန်ဖြစ်ကြတာ စိတ်ကောက်ကြတာမပါသေးဘူး.. မရေးတော့ဘူး လမင်းပဲကောက်တာဆိုတော့ရှက်တယ်။။ :)
လမင်းပုံသိပ်မတင်ဘူးနော်.. အခုလည်းသူခွင့်တောင်းပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... လမင်းတို့အတွဲလိုက်လာဟင်...:P အားလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ..
Posted by ချစ်စံအိမ် at 8:38 AM
ပစ်ပစ် September 25, 2012 at 10:14 AM
ဟဲ့ အပျိုကြီး ငါလေ မပြောလိုက်ချင်ဘူးနော်
Sweety Snow September 25, 2012 at 11:09 AM
အစ်မက ချစ်စရာလေး..ကရင်ပုံစံနဲ့တူတယ်.. အစ်မချစ်သူလည်း ကြည့်ကောင်းတယ်.. လိုက်ဖက်ပါတယ် :)
Nyi Linn Thit September 25, 2012 at 12:49 PM
အဲဒီစာကြောင်းရောက်တော့ ထိုင်ရယ်နေမိတယ်ဗျ...၊း)
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကြားမှာ စည်းကမ်းထားပြီး နားလည်မှု တည်ဆောက်ယူတာ ကျနော့်တစ်ဦးတည်း သဘောအရတော့ ကောင်းပါတယ်၊ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် သိပ်ကျွံဝင်သွားတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်သလဲဆိုတာ လမင်းရဲ့ စာထဲမှာလည်း ပါခဲ့တယ် မဟုတ်လား၊ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လိုက်ဖက်တဲ့စုံတွဲ ပါပဲဗျာ...။း)
မိုးသူ(တောင်ကြီး) September 25, 2012 at 7:16 PM
ပြီးတော့မိုးသူလဲ ချစ်သူ pw မသိချင်ဘူး မိုးသူ Pw လဲမပေးချင်ဘူး
မဟုတ်တာလုပ်ဖို့ pw မပေးတာတောမဟုတ်ဘူးလေ
လူတယောက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဟာ လင်မယားတွေမှာတောင်
ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် သူလဲကိုယ့်ကိုသစ္စာရှိမယ် ကိုယ်လဲသူ့ ကိုသစ္စာရှိမယ်
တဘ၀စာလက်တွဲလို့ ရမှာပဲမဟုတ်လား :)
တတိယမြောက်သမီးတော် September 25, 2012 at 11:07 PM
အန်တီလေးမေခင် September 25, 2012 at 11:24 PM
မြတ်နိုးသူ(MUFL) September 25, 2012 at 11:29 PM
စံပယ်ချို September 26, 2012 at 12:55 AM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် September 26, 2012 at 4:31 AM
တည့်နေတော့လဲ ...........ဟဲ ဟဲ ဟဲ
အသဲလေးတွေနဲ့ဆောက်ထားတဲ့အိမ် September 26, 2012 at 6:01 AM
Candy September 26, 2012 at 10:28 AM
မမလမင်းက ချောလိုက်တာ... ချစ်သူနဲ့လည်း လိုက်တယ်...
၀ါးတီးဆွဲရမယ့် သတင်းကောင်းကို မျှော်နေမယ်နော် :D
မင်းအရိပ် September 26, 2012 at 11:15 AM
ဘူများလဲလို့ မြင်ဖူးပါတယ်လို့ ကြည့်နေတာ... ဟဲ... ဟဲ... အော်...
mstint September 26, 2012 at 9:51 PM
လမင်းလေးက ချစ်စရာလေးပါလား တီတင့်ပုံဖော်ထားတာနဲ့လည်း ခပ်ဆင်ဆင်ပဲး)
စိတ်ကောက်တယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးအတော်များများရဲ့ သဘာဝပေမယ့် တီတင့်တော့ ကောက်တတ်ဘူးကွယ်။
တိုင်ပင်ပြီး ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျ လုပ်တာ မဆိုးဘူး ဟိဟိ။ ကောက်တတ်သူနဲ့ မချော့တတ်သူ လိုက်လဲလိုက်ပါ့း)
အလွမ်းမြို့ September 27, 2012 at 8:13 AM
ဒီလိုဘဲ အရာရာတိုင်းကို ညှိယူကြရတာပေါ့။
နွေမိုး September 27, 2012 at 11:44 AM
ဟမ်..အာပျိုဂျီးဒွေ ခြေလှမ်းသွက်ကုန်ကြပီ. မဖစ်တေးဝူး . စပိတင်ပီးလိုက်ရမယ်.။
♫♪★လွမ်းပိုင်ရှင်★♪♫: September 28, 2012 at 10:09 AM
ဟိုက် မမပျိုပျိုကြီးပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀ကို ချစ်သူနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗျာ....
တွတ်တွတ် October 1, 2012 at 2:01 AM